မဖတ်ရသေးသူ များ ဖတ်စေချင်လို့ ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မဖတ်ရသေးသူ များ ဖတ်စေချင်လို့ ပါ
မဖတ်ရသေးသူ များ ဖတ်စေချင်လို့ ပါ
Posted by မောင် ပေ on Jul 3, 2011 in Creative Writing, Know-How, DIY | 12 comments
http://myanmargazette.net/53772/creative-writing ကို ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး ။
ပညာပေး ဆောင်ပါးလေး ပါ
အဲဒီ အောက် က comment လေးတွေ က ပို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အဲဒီ ကွန်မင့် တွေ ဖတ်ပြီးတဲ့ မောင်ပေ တစ်ယောက် ကတော့
etone ရှိနေမယ့် ဆေးခန်း ကို များ သွားပြ မိခဲ့မယ် ဆိုရင် ဆေးဖိုး ၀ါးခ အလုံအလောက် ယူသွားမယ့် အပြင်
ကန်တော့ပွဲလေး တစ်ပွဲလောက်ပါ ခေါင်းပေါ်ရွက် ယူ သွားဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကိုယ် ရေချိုး မဆင်ခြင်လို့ မှားခဲ့လို့ဆေးခန်းသွားပြရင် အားနာစရာကြီး မဟုတ်ပါလော
နောက်ပြီး ရွာထဲ မှာ တူရာ တူကြောင်း ၀ိုင်း စု တတ်တဲ့ အဖွဲ့ လေး တစ်ခု ရှိနေပြီ ဆိုတာ ကိုလည်း အသိတိုးမိလာကြောင်း
သည် ပို့ စ်လေး နဲ့ ညွှန်းဆို လိုက်ပါရစေနော် ။
ရုံးကအပြန်..မိန်းမဖိုက်တာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ဆွဲခြင်းလေး ဆွဲပြီး
ကော့တော့ ကော့တော့ …စောင့်ကြွားစောင့်ကြွား..
တလောကလုံးသူ့ လုပ်စာစားနေကြသလို မျက်နှာထားနဲ့ ..မော့တော့ မော့တော့ ပြန်လာတတ်တဲ့ အီးတုန်း ရဲ့
အကြောင်းတွေ ဖွ လိုက်ရင်တော့ ပိုပြီးပွဲ ဆူလာမယ်ထင်တာပဲ.
လေကျယ်မနေနဲ့ စမ်းကြည်လိုက်လေ ။
ယူအက်စ်က.. ပေ၇ာဖက်၇ှင်နယ်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ခေါ်ကြပါတယ်..။
ပရောဖက်ရှင်နယ်ဟာ… ပရိုတွေလိုပဲ… လုပ်ကြရတာပါ…။
ပုရွတ်ဆိတ်၊ ယင်ကောင်… သတ်တဲ့အလုပ်တွေတောင်.. လိုင်စင်လိုတယ်..။
အဲဒီလိုင်စင်စာမေးပွဲက… ဘယ်အချိန်ဘာမလုပ်ရ… ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်.. သင်ပေးတာပေါ့..။
ဆရာဝန်ရော..။ ဆေးခန်းထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်တာရော..။ နပ်စ်ရော.. ပရိုအလုပ်တွေပါ…။
ပရိုအလုပ်တွေကို… (လိုင်စင်စာမေးပွဲမရှိရင်တောင်) ပရိုတွေလို.. ကျင့်ကြံလုပ်ကြစေချင်ပါကြောင်း….။
လိင်တူတွေလူ့အခွင့်အရေးတောင်းလာသလို pro တွေလဲ online ပေါ်တက်ပြီး အခွင့်အရေးတောင်း
လာစေချင်တယ် …။ ရုံးမှာလုပ် ဘောက်ချာညာပြ နေတဲ့သူတွေထက်စာရင် သူတို့က ငါးပါးသီလ
အပျော်ပါး လိုက်စားတဲ့ ယောကျာ်းကို ကြည်ဖြူနိုင်မဲ့ မိန်းမ အတော်ရှားတယ် … ။
ပညာပေးဆောင်းပါးမှာ ပြသနာရှာတာ နင့် ဘကြီး 77 မို့လား ။ ငါပွဲဆူအောင်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ။ နင့်ဘကြီး ပြသနာလိုက်ရှာနေတာ ပို့စ်တိုင်းလိုလိုပဲ … ။ ဒီလောက်တောင် ချိတ်ချင်တဲ့ကောင် နင့်ဘကြီးကို ငါကဘာလို့ ရှောင်နေရတာ့မှာလဲ … ။
ဒီဆိုက်ထဲမှာ မတူတဲ့အတွေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရှိလို့ ငါ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းငါရေးတာ ဘာဖြစ်လဲ … ။
ဒါက ဒီလို ရှိတယ် မောင်ပေ … ဒီကိစ္စကို မိန်းကလေးတွေ တော်တော် များများ သည်းမခံ နိုင်ဘူးလေ …ဒါကို ၇၇ က မှန်သေ၇ာင် သွားပြောတော့ အတုတ်ခံရတာ နည်းတောင်နည်းသေး .. မှားတာက ၇၇ ကြီးက ပုဆိုးကြီး အလံထောင်ပီး ရန်တွေ. နေတာဘဲပေါ့ကွယ် ဟီးဟီး .. ၇၇ ရေ မင်းဘက် ကမှန်တယ် ဆိုရင် ဖေဖေ မင်းမေမေ နဲ. မတွေ.ရတာ ကြာပီ သားလေးစောစော အိပ် လို. မင်းမိဘတွေ ပြောဘူးလို.လားကွယ် ဟီဟိ (ဒါတောင် တရားဝင်နော်) .. မင်းကော လူကြီးတွေကို ကျွန်တော် မအားဘူး ဖာချရဦးမယ် လို. ပြောဘူးလို.လားကွယ်… အီးတုန်းလဲ သူတို.မိန်းမ တွေ ဂနို ကူးရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုပီး ဟာသ စ်ိတ်ဓတ်လေးနဲ. ပရို အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို. ပြောပါရစေကွယ်
အပျော်အပါးလိုက်စားတဲ့ ယောကျာင်္းလေးကို မိန်းကလေးတိုင်း သဘောမကျတာသဘာဝပါ
အရင်ဆုံး windtalker က မိန်းကလေးနေရာက ဝင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး အဲတာများနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အမျိုးထဲက ဒါမှမဟုတ် အသိမိတ်ဆွေအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ယောကျာင်္းက ဒီလိုပွေရှုပ်ပြီး အဲဒီရောဂါရလာမယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်လိုနေမလဲ လူတိုင်းကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရေးခွင့်ရှိ ပင်မယ့် တစ်ဖတ်သတ်ကြီးတွေးပြီးရေးရင်တော့ မမျှတဘူးလို့ထင်ပါတယ် …
ကျွန်တော်လည်း ယောကျာ်းပေမဲ့ …. အပျော်ပါးတော့ မလိုက်စားဘူး … ။ တစ်ခါ တစ်လေ ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာ ရှိတတ်ပေမဲ့ … အလွန်ကျွန်မသောက်ဖြစ်ဘူး … သူငယ်ချင်းတွေ ခဏခဏ ဆွယ်တဲ့ ၀ယ်စားတဲ့ဆိုင်တွေလည်း မသွားခဲ့ဖူးဘူး ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်က ၀ယ်စားတယ်၊ ဘယ်သူမှ မသိဘူး ဆိုပေမဲ့ … ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့် ချင်တယ် ။ လူပျို ၊ လူလွတ်ပါ … အနာဂတ်မှာ မိသားစုတစ်ခုကို ဦးဆောင်မှာဖြစ်လို့ အတိတ်ဆိုးတွေ၊ ရောဂါဆိုးတွေမလိုလားဘူး ။
အပျော်အပါးကို ငယ်ငယ်က ရောဂါရမှာကြောက်လို့ မလိုက်စားခဲ့ဘူး။ တော်တော်ကြီးလာတော့ ရောဂါမရအောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိလာလို့ အဲဒါတော့မကြောက်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျနှင့်တဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောတယ် – (မရိုသေ့စကား) မိန်းမရပြီးနောက်မှာမှ မိန်းမနဲ့တပါတ်လောက် အတူမနေရရင် နေချင်လာတယ် ၊ မနည်းစိတ်ထိန်းထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစမလုပ်မိတာ ကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားပြီး အပျော်အပါးမလိုက်စားဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။
လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ နဲနဲကြာမှ အိမ်ထောင်ကျတယ်။ အဲဒီတော့မှ သူငယ်ချင်းပြောတာ မှားမှန်းသိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွေ့အကြုံကို စောစောမရခဲ့ပါလားလို့ တခါမှ နောင်တမရဘူးပါဘူး။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလဲ အိမ်ထောင်မကျခင် လူပျိုစစ်စစ်ဘ၀နဲ့ နေသွားခဲ့ကြတာ မနည်းပါဘူး။
မောင်ပေ တယောက် ခေါက်ဆွဲကြော် နဲ့ သခွားချဉ် စားရတာ အားမရသေးလို့ ငရုတ်သီးမှုန့်တောင် စုံထဲ နာနာ ထည့်ထောင်းပြီး မှုန့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေး စားချင်တယ်နဲ့ တူပါရဲ့။
မောင်ပေ ရဲ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ကြားလိုက်ရမလား။ ထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့။
သူများ ကြိုက်တာ ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့ မတူလို့ ဆိုပြီး အတင်းလိုက်ပြီး ညှိပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
လောကကြီးမှာ လူကောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ် လူယုတ်တွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။
လူယုတ်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရတဲ့ လူက လောကကြီးက ယုတ်မာတဲ့ လူတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကြတာလို့ ပြောလိမ့်မယ်။
လူကောင်းတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရတဲ့ လူက လောကကြီးက ကောင်းတဲ့ လူတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကြတာလို့ ပြောလိမ့်မယ်။
အမှန်တော့ လောကကြီးက သူဟာသူ နေတာ လူတွေက လိုက်ပြီး ပတ်ရှုပ်နေကြတာ။
ဒီတော့ သူ မဟုတ် ငါ မဟုတ် နာမ် နဲ့ ရုပ်.. မကျေနပ်ရင် ကြိုက်တာ လုပ်.. သူတပါးရဲ့ အတွေးနဲ့ ဝေဖန်ချက် ကို ဖလှယ်ခွင့် ရှိတယ် မရိုသေ စကားနဲ့ တိုက်ခိုက် ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။
အားလုံးက တူရာ တူရာ စုပြီး လောကကြီး ကို တည်ထောင်နေကြတာပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ဖူးဆွား ။ သား မှားသွားပြန်ပါပြီ ။ ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ဗျာ